भिडियो Archives - ramechhapkhabar.com
कमेडी सिरियल “गाँइगुँई–राँइचुँई” भाग ६ सार्बजनिक !
२७ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय दर्शकको मन जित्दै गएको कमेडी सिरियल “गाँइगुँई–राँइचुँई” भाग ६ सार्बजनिक भएको छ। पारिवारिक,सामाजिक र राजनितिक बिषयलाई उठान गरको यो सिरियल झबिन्द्र थापा मगरले निर्माण गरेका हुन भने पटकथा,संबाद, लेखन तथा निर्देशन हिराछबी श्रीशाले गरेका छन। अनिश खड्काको छायांकन...
१३ वैशाख, काठमाडौं । यतिबेलाको समयमा टेलिभिजनका दर्शक भन्दा पनि युटुबका दर्शकको जमात बढ्दो छ। हात- हातमा मोबाइल र नेट भएका कारण पनि अचेल टेलिभिजनमा भन्दा पनि मोबाइल युटुबमा दर्शक भिड नगन्य मात्रामा छ। जसका कारण कुनै बेला टेलिभिजनमा स्थान नपाउने सिरियल (धारावाहिक )...
ऋतु केसीको ‘भाग्यमा लेखेर’ बोलको गित सार्वजनिक !
१ वैशाख, काठमाडौं । पछिल्लो समय बजारमा नयाँ नयाँ गीतहरु आउने क्रम जारि छ, यसै बीच नयाँ बर्षको अवसर पारेर बैशाख १ देखि “ भाग्यमा लेखेर” बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । केटी-केटी बिचको प्रेम सम्बन्ध भएको खबर सुन्दा तपाईलाई अचम्म लाग्न सक्छ, तर...
प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘पिर’ ले सामाजिक सन्जालमा तरंग
२८ फागुन, काठमाडौं । गायक प्रकाश सपुतको नयाँ गीत ‘पिर’ ले तरंग ल्याएको छ। शुक्रबार युट्युबमार्फत् सार्वजनिक भएको गीतले सामाजिक सन्जालमा तरंग ल्याएको हो। गीत सार्वजनिक भएको २४ घण्टा पनि नबित्दै ५ लाखभन्दा बढीले हेरिसकेका छन्। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वपछि टाठाबाठाले सत्तामा पहुँच पुर्याएको तर...
बलात्कारमा दोषी ठहरिए पल शाहलाई कति हुन्छ सजाय, कसरी अघि बढ्छ प्रक्रिया? (भिडिओ)
२० फागुन, काठमाडौं । एक नाबालिग गायिकालाई बलात्कार गरेको अभियोगमा प्रहरीले अभिनेता पल शाहलाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिरहेको छ। तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका शाहको पक्षमा दमौलीमा प्रदर्शन हुने गरेको छ। बलात्कारको घटनामा पीडित नाबालिग गायिका भए पनि सामाजिक सञ्जाल र युट्युबमा पीडितलाई थप पीडा...
सर्प नाकबाट घुसारेर मुखबाट निकालिन यि डाक्टरले (भिडियो)
विश्वमा विभिन्न प्रतिभा भएका मानिसहरु छन् । धेरै मानिसहरुले अनौठो कार्य गरेर विश्वलाई नै चकित पारेका छन् । सर्प भन्ने बित्तिकै धेरै मानिसहरु तर्सिने गर्छन् । तर पाकिस्तानकी एक युवतीलाई भने सर्प संग कुनै डर लाग्दैन । उनले एक जिउँदो सर्पलाई आफ्नो नाकबाट छिराएर...
प्रिज्मा भन्छिन मैले प्रेममा कहिल्यै पनि सम्मान पाइन् सबै भन्दा बढी घृणा उनैलाई गर्छु (भिडियो हेर्नुस्)
काठमाडौं । कलाकार सागर लम्सालसंग प्रेममा परेको चर्चामा रहेकी प्रिज्माले आफुले प्रेममा सम्मान नपाएको बताएकी छन् । बलेसंगको व्रेकअपको चर्चा सुरु भएसंगै उनको यस्तो अभिब्यक्ति पनि सार्वजनिक भएको छ । उनले आफ्नो अभिब्यक्तिमा सागरको नाम त लिएकी छैनन् तर आफुले अब कुनै बेला प्रेममा...
काठमाडौं, २५ कात्तिक । नेपाली गित संगीतको क्षेत्रमा एक पछी अर्को गित बजारमा आउने क्रममा शारदा रसाइली र अशोक पान्डेको आवाज रहेको ”सल्लेरी पाखैमा” बोलको गित सार्वजनिक भएको छ । गीतमा शब्द पुरु लम्साल,सङ्गीत / एरेन्ज नारायण दङ्गाल, ध्वनि मिश्रण नारायण दङ्गाल, स्टुडियो म्युजिक...